မကြိုက်ဆုံး ဖြေရခက်ဆုံး မေးခွန်းကို ထုတ်ပြောလာတဲ့ တိုင်ရွန်အကြောင်း….. - Zeekwat Hot News
မကြိုက်ဆုံး ဖြေရခက်ဆုံး မေးခွန်းကို ထုတ်ပြောလာတဲ့ တိုင်ရွန်အကြောင်း…..
August 12, 20190118
မော်ဒယ်မင်းသားချော တိုင်ရွန် ကတော့ မြန်မာပြည်ရဲ့ အ၀င်းဆိုပြီး မိန်းကလေးပရိသတ်တွေကြား လူသိများထင်ရှားသူတစ်ယောက်ပါ။အမိုက်စား Body နဲ့ ယောက်ျားပီသတဲ့ ရုပ်ရည်ကို ပိုင်ဆိုင်ထားတဲ့ တိုင်ရွန်ရဲ့ ခပ်မိုက် မိုက် စတိုင်ဒီဇိုင်းတွေကလည်း မိန်းကလေးပရိသတ်တွေ အတွက် ကြွေချင်စရာဖြစ်နေပါတယ်။တက်တူးတွေ အများကြီး ထိုးထားတဲ့ မြန်မာဆယ်လီ အမျိုးသားတွေထဲက တစ်ယောက်ပါ။
Photo : Tyron Bejay fb
တိုင်ရွန်ကတော့ သူ့ အတွက် မနှစ်သက်ဆုံး ဖြေရအခက်ဆုံး မေးခွန်းတစ်ခု အကြောင်းကို ဖွင့် ပြောလာပါတယ်။ အဲ့ ဒါကတော့ တက်တူးတွေ ဘာလို့ အများကြီး ထိုးတာလဲ ဆိုတဲ့ မေးခွန်းပါ။အဲ့ဒီမေးခွန်းဟာ ဘာလို့ ဒီလောက် ကြည့်ကောင်းနေရတာလဲ ဆိုတဲ့ မေးခွန်းလိုပဲ သူ့ အတွက် အရမ်းဖြေရခက်တယ်လို့လည်း အရွန်းဖောက် ထားပါတယ်။
“ကျွန်တော် မနစ်သက်ဆုံး ဖြေရခက်ဆုံး မေးခွန်းတစ်ခုက …. မင်းဘာလို့ တက်တူးတွေ အများကြီးထိုးထားရတာလဲ? အဲ့ဒီမေးခွန်းက မင်းဘာလို့ ဒီလောက်ကြည့်ကောင်းနေရတာလဲဆိုတဲ့ မေးခွန်းလိုဘဲ ဖြေရခက်တယ် …..” ဆိုပြီး တင်ထားပါတယ်။
တိုင်ရွန်ကတော့ ဒီရက်ပိုင်းမှာ ပွဲတက်တွေ ပိုများနေတာကို တွေ့ရပါတယ်။မကြာသေးခင်ကလည်း Gold AYA ကားသစ် မိတ်ဆက်ပွဲကို တက်ရောက်ခဲ့ပါတယ်။တိုင်ရွန်သရုပ်ဆောင်ထားတဲ့ “ကလေးသိစေ” ဆိုတဲ့ MV လည်း 9.8.2019 မှာ ထွက်ရှိလာဖို့ရှိပါတယ်။
Source : Tyron Bejay fb
မောဒြယမြငြးသားခွော တိုငရြှနြ ကတော့ မှနမြာပှညရြဲ့ အဝငြးဆိုပှီး မိနြးကလေးပရိသတတြှကှေား လူသိမွားထငရြှားသူတစယြောကပြါ။အမိုကစြား Body နဲ့ ယောကြွားပီသတဲ့ ရုပရြညကြို ပိုငြဆြိုငထြားတဲ့ တိုငရြှနရြဲ့ ခပမြိုကြ မိုကြ စတိုငဒြီဇိုငြးတှကလေညြး မိနြးကလေးပရိသတတြှေ အတှကြ ကှခငွေစြရာဖှစနြပေါတယြ။တကတြူးတှေ အမွားကှီး ထိုးထားတဲ့ မှနမြာဆယလြီ အမွိုးသားတှထေဲက တစယြောကပြါ။
တိုငရြှနကြတော့ သူ့ အတှကြ မနှစသြကဆြုံး ဖှရအေခကဆြုံး မေးခှနြးတစခြု အကှောငြးကို ဖှငြ့ ပှောလာပါတယြ။ အဲ့ ဒါကတော့ တကတြူးတှေ ဘာလို့ အမွားကှီး ထိုးတာလဲ ဆိုတဲ့ မေးခှနြးပါ။အဲ့ဒီမေးခှနြးဟာ ဘာလို့ ဒီလောကြ ကှညြ့ကောငြးနရတောလဲ ဆိုတဲ့ မေးခှနြးလိုပဲ သူ့ အတှကြ အရမြးဖှရခေကတြယလြို့လညြး အရှနြးဖောကြ ထားပါတယြ။
“ကွှနတြော မနစသြကဆြုံး ဖှရခေကဆြုံး မေးခှနြးတစခြုက …. မငြးဘာလို့ တကတြူးတှေ အမွားကှီးထိုးထားရတာလဲ? အဲ့ဒီမေးခှနြးက မငြးဘာလို့ ဒီလောကကြှညြ့ကောငြးနရတောလဲဆိုတဲ့ မေးခှနြးလိုဘဲ ဖှရခေကတြယြ …..” ဆိုပှီး တငထြားပါတယြ။
တိုငရြှနကြတော့ ဒီရကပြိုငြးမှာ ပှဲတကတြှေ ပိုမွားနတောကို တှရေ့ပါတယြ။မကှာသေးခငကြလညြး Gold AYA ကားသစြ မိတဆြကပြှဲကို တကရြောကခြဲ့ပါတယြ။တိုငရြှနသြရုပဆြောငထြားတဲ့ “ကလေးသိစေ” ဆိုတဲ့ MV လညြး 9.8.2019 မှာ ထှကရြှိလာဖို့ရှိပါတယြ။
Myanmar’s got talent ပွဲမှာ အပျိုလေးတွေရှုံးလောက်အောင် ဟိုအရင်အချိန်တွေကအတိုင်း လှနေတဲ့ မခိုင်လေး